Football Khabar » आज लिग लिडर टोटनह्याम र दोस्रो स्थानको लिभरपुलको भिडन्त : कसले मार्ला बाजी ?
आज लिग लिडर टोटनह्याम र दोस्रो स्थानको लिभरपुलको भिडन्त : कसले मार्ला बाजी ?
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज सिजनका ठूला खेलहरूमध्ये एक खेल हुँदैछ, जहाँ साबिक च्याम्पियन लिभरपुल र टोटनह्याम यो सिजनको पहिलो लेगको खेलमा आमनेसामने हुँदैछन् । आजको खेल लिग लिडर र दोस्रो स्थानको टोलीबीचको भिडन्त पनि हो ।
हाल अंक तालिकामा टोटनह्याम शीर्ष स्थानमा छ भने लिभरपुल दोस्रो स्थानमा छ । दुवै टिमले समान १२–१२ खेल खेलेको अवस्थामा दुवैको खातामा समान २५–२५ अंक छ । तर, गोलअन्तरका आधारमा टोटनह्याम शीर्ष स्थानमा छ भने लिभरपुल दोस्रोमा ।
आजको खेल दुवै टोलीका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । समान अंक भएकाले टोटनह्याम शीर्ष स्थानमा अग्रता कायमै राख्न लिभरपुलविरुद्ध स्पष्ट जित वा कम्तीमा पनि बराबरी नतिजाका लागि लड्नेछ । यता, लिभरपुल भने लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिन आज यो सिजन उत्कृष्ट लयमा रहेको टोटनह्यामलाई हराउने दाउमा छ ।
आजको खेल लिभरपुलको घरेलु मैदान एनफिल्ड रंगशालामा नेपाली समयअनुसार राति ठीक १ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ । आज आफ्नो घरमा उत्रिँदा लिभरपुल निकै चर्को दबाबमा हुनेछ । उसले पछिल्ला ५ खेलमध्ये मात्रै २ खेल जितेर ३ खेल बराबरी गरेको छ । यता, टोटनह्यामले भने पछिल्ला ५ खेलमध्ये ३ खेल जितेर २ खेल बराबरी गरेको छ ।
आज अवे मैदानमा उत्रिँदा टोटनह्यामको टोलीमा सबैजसो प्रमुख खेलाडी उपलब्ध छन् । यो सिजन शानदार लयमा रहेका फरवार्डद्वय ह्यारी केन र सन हेङ मिन आज पनि ठीकठाक टोलीमा छन् । यो सिजन यी दुवै खेलाडीले टोटनह्यामलाई उत्कृष्ट लयमा हिँडाउन नायकको भूमिका खेलिरहेका छन् ।
हालसम्म केनले लिगमा मात्रै १२ खेलबाट ९ गोल गर्दै १० गोलमा असिस्ट प्रदान गरेका छन् । उनी हाल युरोपका टप–५ लिगमा सर्वाधिक गोलमा योगदान दिने खेलाडी हुन् । यता, सनले पनि यो सिजन लिगमा हालसम्म १२ खेलबाट १० गोल गर्दै ४ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । सन र केन दुवै मिलेर यो सिजन प्रिमियर लिगा कूल २४ खेलबाट १९ गोल गरेर १४ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । दुवै मिलेर कूल २४ खेलबाट ३३ गोलमा योगदान दिइसकेका छन् । यी दुवै खेलाडी यस सिजन युरोपमा बेस्ट पार्टरका रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यता, लिभरपुल भने आज घरमै खेल्दा केही दबाबमा हुनेछ । उसका केही प्रमख खेलाडी घाइते छन् । प्रमुख डिफेन्डर भर्जिल भान डाइक लामो समयका लागि टोलीबाहिर रहँदा फरवार्ड डिएगो जोटा पनि दुई महिनालाई मैदान बाहिर छन् । अन्य २ जना खेलाडी घाइते भएपछि लिभरपुललाई चोटले केही पिरलो थपेको छ । तर, मोहमद सालाह, साडियो माने, रोवर्ट फर्मिन्हो, जर्जिन्हो विज्नाल्डुमजस्ता खेलाडी ठीकठाक रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति १ पुष २०७७, बुधबार १२:०८